Filamentan'ny mpanonta marbra 3D PLA
PLA Wood Color 3D Printer F ...
1. [Filament malefaka misy elastika avo] TPU Flexible Filament dia filamentan'ny polyurethane (TPU) miorina amin'ny thermoplastic izay novolavolaina manokana hiasa amin'ny ankamaroan'ny mpanonta 3D birao. Manana hamafin'ny morona 95A izy ary afaka mivelatra in-3 mihoatra ny halavany tany am-boalohany.
2. [Free Build Surface] Firaikitra tsara eo amin'ny farafara, ambany ady ary fofona ambany, ataovy mora pirinty ireo filament 3D mora azo. Afaka mifamatotra tsara amin'ny fandriana pirinty izy raha tsy misy fanafanana.
3. [Tsy misy sakantsakana & tsy misy bubble] TPU filamenta 1.75 Vacuum tombo-kase manome anao traikefa fanontana milamina sy milamina miaraka amin'ireo refill ireo. Tsy misy maimaim-poana ary tsy hisy bubble hampanantenaina.
4. [Mifanaraka malalaka] Mifanaraka amin'ireo mpanonta FDM rehetra eny an-tsena izay manaiky 1.75 mm filament; Anisan'izany ny Prusa i3, Monoprice MakerSelect, SainSmart xCreality, ary ireo mpanonta RepRap hafa.
5. [Fahamarinana sy fahamendrehana dimensional] mandroso refy refy reflexaire sy ny rafitra fanaraha-maso adaptatera amin'ny famokarana dia manome filamatrana TPU malefaka ireo mba ho fandeferana henjana, savaivony 1.75mm, refy marina refy + / - .02 mm tsy misy fihoaram-pefy; Sponjy 1 kg (2.2lbs)
1. [90% Efa nivory]: Manamora ny fivoriambe ny vaovao. Ireo faritra sarotra toy ny cantilever, gantry, ary no noheverina dia natambatra alohan'ny nialany tao amin'ilay orinasa. 90% ny fizotry ny fivoriambe dia vita mialoha. Mamonjy 50% amin'ny fotoanan'ny fivoriambe raha oharina amin'ny mpanonta hafa, ary miantoka ny kalitaon'ny fanontana tsara kokoa.
2. [3.5 ”Tselatra fikitika feno loko]: UI sariaka sy mora ampiasaina, fanontana an-tserasera amin'ny karatra SD na USB. Manaova veloma ny efijery bokotra fanao mahazatra.
3. [Auto Leveling]: Tsy mila apetaka amin'ny tanana ny fandriana fanontana. Mila tsindrio fotsiny ny kisary haavo auto ary miandrasa ny mpanonta hamita ny fananganana azy ihany.
4. Afanaina amin'ny hafanana avo kokoa ny fandriana fanontana ho an'ny ABS sy ny filamentan'ny tanjaka avo.
5. [Jiro fanontana]: Ny jiro LED dia manampy anao hitandrina ny fanaovana pirinty amin'ny fotoana rehetra hahafahanao mahafantatra tsara ny momba ny fanontana.
Endri-javatra: 1. PRINT HEATING & RESUME FAST：Mila 3 minitra fotsiny vao hahatratra ny hafanan'ny fandriana amin'ny fandriana mafana. Ny mpanonta dia voaro amin'ny alàlan'ny herinaratra avy amin'ny tsimok'aratra ary ny fahatapahan'ny herinaratra. Raha very tampoka ny herinaratra elektrika dia azonao atao ny manohy ny fanontana avy amin'ny sosona farany. 2. FAHATONDRANA FANORENANA：Ny stable Titan extruder dia afaka manonta maodely ambony kalitao. Ny fivezivezena milamina sy miorina amin'ny axis X / Y / Z dia mahatonga ny fanaovana pirinty hiasa tanteraka. 3. esory moramora: ambonin'ny fandriana andriamby ho an'ny fanesorana modely mora. Esory mora foana ny tampon'ny pirinty andriamby amin'ny fandriana mafana ary esory ireo modely tsy mila scraper ilaina. 4. SAFE POWER SUPPLY: Ny famatsiana herinaratra marika dia manome herinaratra bebe kokoa amin'ny vokatra azo antoka ka mihena ny fiovan'ny mari-pana, indrindra mandritra ny fanontana lava sy lava. Afanaina haingana kokoa ny fandriana fanontana ary amin'ny mari-pana ambony kokoa noho ny fanontana ABS sy ny filamenta matanjaka avo lenta hafa. 5. Fivoriana haingam-pandeha: ny mpanonta BestGee T220S dia misy faritra maromaro mivory, apetaho ny fonosana, ny nozera, ampifandraiso ny tariby vitsivitsy, dingana 3 ihany no vita mora foana na dia ireo vao manomboka ao anatin'ny 5 minitra fotsiny aza.
1. [Print Volume lehibe]: 300 * 300 * 400m boky printy lehibe ho an'ny maodely lehibe kokoa. Ny ankamaroan'ny hevitrao lehibe dia tsy ho nofinofy. Rafitra fanamafisana ny axis Double Z, mihetsiketsika miaraka amin'ny fahamendrehana avo lenta. Azonao atao ny manonta pirinty avo kokoa tsy misy ahiahy.
2. [4.3 "Screen Touch Touch]: veloma ny efijery knob fanao mahazatra. Mora ny miasa amin'ny efijery mikasika ny loko 4.3 ", UI tsotra sy sariaka miaraka amina endrika manankarena.
3. [Auto leveling]: miaraka amina modely fanalefahana fiara mandeha ho azy izay mahatsikaritra ny isa 25, manohana ny fanonerana ny fotoana ambony amin'ny halavan'ny nozera. Tsy ho olana izany raha miondrika ny fandrianao.
4. [Vetivety fanamarihana filamenta] Rehefa hitan'ny mpitsikilo filamentana fa vaky na lany ny filamentana dia mijanona ho azy ny rafitra amin'ny fanaovana pirinty ary manosika azy ireo hanome sakafo.
5. [Avereno atao pirinty] Tsindrio iray hanombohana avy amin'ny toerana voarakitra farany rehefa tapaka ny herinaratra. Hanontany anao ny mpanonta raha te-hamerina ny fanontana ianao na tsia aorian'ny fiverenanao amin'ny mpanonta.
1.LARGE BUILD VOLUME: T300S dia miaraka amin'ny iray amin'ireo habetsaky ny fananganana 300 * 300 * 400mm, afaka miasa bebe kokoa amin'ny hevitrao izy ary manonta modely lehibe kokoa. Ny rafitra fanamafisana ny axis Double Z dia miantoka ny fiasan'ny z ny lalana. Tsy mila miahiahy be loatra momba ny mpanonta ianao raha sendra lozam-pifamoivoizana rehefa manonta ireo faritra avo amin'ilay maodely.
2.SIMPLICITY: ny efijery dia zoro fampisehoana 45 degre izay namboarina ho olombelona sy mahazo aina. Ary ny efijery fanaraha-maso knob an-tserasera rehetra dia avelao ho tsotra kokoa ny fandidiana.
3.Mora ny manangona: Ny ankamaroan'ny ampahany dia mivory, mila mametraka fotsiny ny bracket amin'ny fotony miaraka amin'ny visy ianao ary mampifandray ireo tariby. Dimy minitra fotsiny vao afaka miasa ny mpanonta.
4. FLASH HEATING & RecOVER PRINTING: T300S dia mila 3 minitra fotsiny hamelana ny fandriana hafanana hahatratra 100 ℃ izay haingana kokoa noho ny ankamaroan'ny marika an'ny mpanonta amin'ny vidiny mitovy. Raha sendra misy lozam-pifamoivoizana mitranga mandritra ny fanontana ary tapaka ny herinaratra dia aza matahotra fa ho sitrana tanteraka ireo mpanonta.
5.WARRANTY SY SUPPORT: Manana ekipa matihanina sy varotra aorian'ny varotra izahay. Warranty 12 volana sy fanampiana ara-teknika 24hrs no ampanantenaina.
Masinina fanaovana sokitra laser azo zahana LC100
1. [Compact & Portable] Ny mpanao sokitra laser mora ampiasaina dia tsy maka ny toeranao. Ny mpihazona azo ahodina dia tsy mila miahiahy mitondra olana na fahasimbana. Ento na aiza na aiza, ataovy sokitra zavatra maro, avelao hanafaka ny zavaboarinao.
2. [Fanaraha-maso Bluetooth sy fampiharana mora ampiasaina] Mifandraisa amina finday avo lenta amin'ny alàlan'ny Bluetooth tsy misy tariby. Ampiasao ny finday goba amin'ny APP finday. 100mm * 100mm sokitra sokitra: Fomba firavaka sokitra efatra: grayscale, pirinty, monochrome, drafitra ary Stamp.
3. [Laser mazava tsara] 405nm hazavana matetika miaraka amin'ny famaritana avo lenta sy fahombiazana, androm-piainana maharitra. Afaka sokitra amin'ny hazo, Taratasy (Tsy ho an'ny taratasy fotsy), Volotsangana, Plastika, Lamba, Voankazo, Tsapa sns TSY ho an'ny Metal, Glass, Jewel.
4. [Fiarovana amin'ny fiarovana] Fitaovana lohan'ny laser avo lenta hahatonga faharetana, fitoniana tsara kokoa ary fotoana fiasana maharitra; Napetraka ho fiarovana ny fiarovana ny hetsika. Hakatona ny Laser Cube mandritra ny fihozongozona, hisorohana ny ratra mety hitranga noho ny hetsika tsy ampoizina.
5. [Haavo sy torolàlana ahitsy] 200mm elanelana miasa miaraka amin'ny haavon'ny 80mm azo ovaina; 90°fanitsiana zoro ho an'ny zavatra samihafa amin'ny toe-javatra samihafa.
1. [Premium PLA Filament] TronHoo PLA 3D filament dia mampiasa akora madio tsy misy fangarony avo lenta izay misy fihenam-bidy ambany sy lafika mifamatotra tsara, mamaly ny fangatahanao momba ny tetik'asa fanontana isan-karazany amin'ny hafanana avo kokoa. 100% vita amin'ny akora voajanahary tia namana. Izy io dia voajanahary, tsy misy poizina ary sariaka amin'ny tontolo iainana.
2. [Tsy misy sakantsakana & Tsy misy bubble] Maina tanteraka mandritra ny 24 ora alohan'ny fonosana sy ny vaksina mihidy amin'ny desiccants, ahafahana manao pirinty malefaka sy milamina kokoa. Koa satria mora voan'ny hamandoana ny filamentan'ny PLA, dia ario azafady amin'ny toerana maina sy mangatsiatsiaka mba hahomby amin'ny fanaovana pirinty tena tsara.
3. [Kely fampifanarahana & fampifanarahana marobe] Fanodinana mekanika feno sy fanaraha-maso henjana izay manome antoka ny filamenan'ny PLA milamina sy mora omena. Miasa tanteraka amin'ny ankamaroan'ny mpanonta FDM 3D eny an-tsena.
4. [Fahamarinana sy fahamendrehana refy] Ny rafitra savaivony refesin'ny refy ary ny rafitra fanaraha-maso mifanaraka amin'ny tena manokana amin'ny famokarana dia miantoka fandeferana henjana. Diameter 1.75mm, refy marina + / - 0,02 mm tsy misy fanitarana; Sponjy 1 kg (2.2lbs).
5. [Fampiasana maro] Aza manao maodely mihoatra ny fanontana 3D! Mamolavola ary mamelà ny zavatra noforoninao sy ireo sombin-javatra ampiasaina hafa ampiasaina amin'ny fampiharana isan'andro toy ny trangan-telefaona manokana, kitapom-batsy, mpantsaka sira, sary sokitra, mpihazona labozia, marika alika ary taonina maro hafa.
Filamentan'ny mpanonta ABS 3D
1. [Kely Fofona, Kely Warping] Ny filamentana TronHoo ABS dia natao tamina resina ABS marolafy polymerized, izay misy ambany indrindra ny atiny miovaova raha oharina amin'ny resins ABS nentim-paharazana. ABS dia 3D vita pirinty amin'ny 220°C hatramin'ny 250°C, soso-kevitra ny hampiasa fandriana mafana na toerana fananganana mihidy hifehezana ny fampangatsiahana an'ity fitaovana ity ary hisorohana ny fiakarana.
2. [Fanontana milamina sy miorina]: TronHoo 3D dia mampanantena tsy misy kitrokely, tsy misy miboiboika ary tsy misy clogs. Ny fahombiazany dia miorina amin'ny fantsom-panafody malefaka sy ny firaiketam-po tsara, tsy misy olana amin'ny tadiny na eo ambanin'ny toerana mety indrindra.
3. [Fanoherana avo lenta] Ny ABS dia filamenta mahazaka hafanana mahery setra, izay mamorona endrika matanjaka sy manintona. Ny ankafizin'ny prototyping azo ampiasaina, ny fanontana ABS dia tsara fa tsy mila manosotra.
4. [Fahamarinana sy fahamendrehana refy] Ity filamenta ABS 1,75mm misy savaivony ity dia natao tamina fenitra famokarana henjana. Tsy hanana ny olan'ny fanelingelenana fanontana ateraky ny knotting ny filamenta.
5. [Vacuum fonosana] Famaohana tanteraka mandritra ny 24 ora alohan'ny fonosana. Mampiasa kitapo fonosana vita amina habakabaka izahay amin'ny fonosana fanontam-pirinty 3d hitazonana ny isan-jaton'ny hamandoana farafahakeliny sy voafehy. Mba hisorohana ny barazy sy ny fivoahana
Filamentan'ny mpanonta PETG 3D
1. [Atambatra ny PLA sy ny ABS] Ny filament PETG dia manambatra ny tombotsoan'ny filamenta mpanonta PLA 3D sy ny filamentan'ny mpanonta ABS 3D, mora ampiasaina toy ny PLA, tanjaka maharitra toy ny ABS.
2. [Tsy misy sakantsakana & tsy misy bubble] Namboarina sy novolavolaina tamin'ny patanty Free-Clog mba hanomezana toky ny fanontana milamina sy milamina. Ny fanamainana mandritra ny 24 ora alohan'ny famonosana alim-bovoka vita amin'ny alimo, izay afaka miaro amin'ny fomba mahomby ny filamenan'ny PETG amin'ny hamandoana.
3. [Fahamarinana sy fahamendrehana refy] Ireo filamenta PETG henjana ireo mba ho fandeferana henjana. Diameter 1.75mm, refy marina + / - 0,02 mm tsy misy fanitarana; Sponjy 1 kg (2.2lbs).
4. [Fifanarahana midadasika] Noho ny fenitra avo lenta amin'ny resaka fahamendrehana amin'ny famokarana sy ny fandeferana kely amin'ny savaivony +/- 0.02mm, afaka miasa izy ary mifanaraka tsara amin'ny ankamaroan'ny mpanonta printy 1.75mm FDM 3D mahazatra.
5. [Tsy misy risika] Warranty maimaim-poana mandritra ny iray volana, famerenana vola 30 andro raha tsy afa-po ianao.
Filamentan'ny mpanonta PCL 3D
1. [SAFERA ​​& FAHASALAMANA MATERIAL]: Raha ampitahaina amin'ny PLA, filament PCL miaraka amin'ny mari-pana miempo 70 ambany℃ izay manala ny loza ateraky ny tanana mirehitra. Ankoatr'izay, ny famenoana filament PCL dia 100% azo avy amin'ny loharanon-karena azo havaozina izay tsy misy poizina, tsy misy fofona, tsy mahasosotra ary mora simba.
2. [ULTRA-SMOOTH] filamenta PCL ho an'ny penina 3D miaraka amin'ny teknolojia famoahana ambany Temp sy filamenta PCL haingam-pandeha 1.75mm savaivony miantoka tsara ny sary 3D anao tsy misy residue na bubble misy menaka, tsy misy clogging.
3. [QUALITY avo lenta] Ny penina 3D penina avo lenta sy avo lenta miaraka amin'ny 1.75mm, ny refy refy + / - .05 mm tsy misy fihoaram-pefy.
4. [FIFANDRAISANA UNIVERSAL] Mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny Pirinty 3D Pens / 3D eny an-tsena.
5. [Tsara ho an'ny ankizy mamorona] Ny Printer Filament dia fanomezana tsara ho an'ny ankizy amin'ny Krismasy, tsingerintaona ary fialantsasatra; Manomàna fitaovana ampy hamadihana ny hevitra vaovao ho tena zava-misy.
1. Fahatsapana toy ny landy] Mamirapiratra mamirapiratra miaraka amin'ny famirapiratana landy, manome sentona malefaka, perila ary tsy manam-paharoa. Ny singa vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita 3D sy vita amin'ny Silk Glossy Smooth, tonga lafatra amin'ny zavakanto, asa tanana, DIY, ary tetikasa printy 3D maro samihafa.
2. [Ataovy pirinty] Ny tanjaky ny fifamatorana tsara dia mampatanjaka kokoa ireo faritra fanontana. Mamolavola tsara, tsy misy bubble, tsy misy miolakolaka, manome sakafo tsy tapaka, milina pirinty, tsy misy manentsina, sariaka eco, mety amin'ny fanontana anaty trano.
3. [Mifanaraka avo lenta] 1.75mm Silk PLA filament miaraka amin'ny fandeferana amin'ny savaivony avo lenta, famolavolana mba hifanaraka amin'ny ankamaroan'ny mpanonta FDM 3D eny amin'ny tsena, BestGee, Ultimaker, derivatives RepRap, MakerBot, Makergear, Prusa i3, Monoprice MakerSelect ary maro hafa.
4. [Torohevitra fanontana]: Ampirisiho ny fandriana hafanana 50-60°C. Mamporisika ny mari-pana fanontana: 200°C. Mba hisorohana ny fifangaroana dia ampidiro ao anaty lavaka fikosoham-bao ny filament mba hamboarina isaky ny ampiasaina.
5. [Package & Warranty]: Fanamainana tanteraka mandritra ny 24 ora alohan'ny famonosana aluminium foil. Fiantohana iray volana maimaim-poana, famerenana vola 30 andro raha tsy afa-po ianao.